Mareykanka oo Duqeyn Ku Dilay Hoggaamiye Katirsan Xarakada Taliban.
Tuesday February 28, 2017 - 20:12:34 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiye katirsan Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa ku shahiiday duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayen ee dowlada Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa markale duqeyn xagga cirka ah ku dishay mid kamida mas’uuliyiinta imaarada Islaamiga Afghanistan xilli mareykanku uu sheegay in uu xoojinayo dagaalka uu kula jiro xoogaga islaamiyiinta caalamka dagaallamaya.
Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa ku dhawaaqday inuu Shihiiday Waaligii gobalka Qunduuz ee dalka Afghanistan Allaah Shahaadadiisa haka aqbalo Sheekh Mullah Cabdi Salaam oo sidoo kale ahaa qaa’id sare oo dhanka Caskariga ah.
Waaliga ayaa ku shihiiday duqeyn diyaaradaha duuliye la’aanta dowlada Nasaarada Mareykanka saacadihii lasoo dhaafay ka geysteen qeybo ka mid ah gobalka Qunduus ee dalka Afghanistan.
Afhayeenka Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan Sheekh Dabiixullaahi Mujaahidiin ayaa qoraal uu soo saaray ku iclaamiyay Istish-haadka Sheekh Mullah Cabdi Salaam.
Waaliga Shahiiday ayaa ka mid ahaa raggii ugu horeeyay ee garab taagnaay Amiirul Mu’miniin Mullah Muxamed Cumar Raximahullaah xilligii uu bilaabanayay Jihaadka Afghanistan waxa uu sidoo kale ahaa Mas’uul taariikhweyn ku dhex leh jihaadka iyo guud ahaan Muslimiinta.
Mas’uuliyiinta xarakada islaamiga Taliban ayaa muslimiinta uga tacziyadeeyay istsih-ka sheek Mulla Cabdi Salaam, gobolka Qunduuz ee uu waalliga ka ahaa sheekha shahiiday ayaa bilihii lasoo dhaafay duullaanno ballaaran kala kulmayay mujaahidiinta imaarada.
Intabadan magaalooyinka gobolka qunduuz waxaa gacanta ku dhigay mujaahidiinta Taliban, tallaabadan uu mareykanku ku dilay sheikh mulla Cabdi salaam ayaa qeyb ka ah taageerada uu siinayo ciidamada xukuumadda dabadhilifka ee fadhigeedu yahay magaalada Kaabuul.
Duqeyn sanaddii lasoo dhaafay ka dhacday xadka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan waxaa lagu dilay Mulla Akhtar Mansuur oo ahaa amiirkii imaarada islaamiga Afghanistan.
Dhinaca kale wasaaradda G/dhigga Mareykanka ayaa xaqiijisay in weerar ka dhacay waqooyiga Afghanistan ay ku dishay Mulla C/salaam iyo Afar dagaalyahan oo ilaala u ahaa.
Weeraro Lagu Qaaday Saldhigyo Ciidan Oo Kuyaal Xaafado Katirsan Degmada Huriwaa.
Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Degmada Qansaxdheere.
Maleeshiyaadka 'Xaslinta' Oo Sedax Qof Shacab Ah Ku Dilay Muqdisho.